Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Iindwendwe zase-US: IHawaii igqwesile, i-COVID okanye ayikho i-COVID!
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-81% yabafikeli base-US balinganisa uhambo lwaseHawaii njengoLugqwesileyo kuvoto lokwaneliseka kwabatyeleli kwi-COVID-19.
Ngo-Okthobha ka-2021, inkqubo yoHambo oluKhuselekileyo yaseHawaii yavumela abakhweli abaninzi abafika besuka ngaphandle kwelizwe ukuba bagqithe kunyanzeliso lokuzihlala bodwa iintsuku ezili-10 ukuba baye bagonywa ngokupheleleyo e-US okanye ngeziphumo zovavanyo ezisebenzayo ze-COVID-19 ze-NAAT ezivela kwabaThenjiweyo. Uvavanyo lweqabane.
Abatyeleli abaphinda-phindayo bebelindeleke ukuba bagonywe ngokupheleleyo kwaye amathuba okuba agonywe ayanda ngokukhula.
Abakhenkethi abaselula, abachazwa njengabangaphantsi kweminyaka engama-35 ubudala, ngabona bavakalelwa kukuba uhambo lwabo lungaphezu koko bebekulindele.
Xa bebuzwa malunga namava abo, phantse bonke (98%) abaphendulayo balinganise ubuhlobo babasebenzi kunye nabahlali baseHawaii ngokuthi "Okugqwesileyo" okanye "Ngaphezulu komndilili."
The Igunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) ikhuphe iziphumo zophononongo lwamva nje olukhethekileyo lokulandela umkhondo, oluphonononge abatyeleli abavela kwi-Continental US abatyelele eHawaii ukusuka ngo-Okthobha woku-1 ukuya ku-Okthobha 5, 2021, ukulinganisa amava abo ngenkqubo yoHambo oluKhuselekileyo yaseHawaii kunye nolwaneliseko lohambo lulonke. Olu luvavanyo lwesine nolokugqibela lwabatyeleli kuthotho oluqale ekupheleni konyaka ophelileyo.
Uninzi lwabatyeleli (81%) balinganisela abo Hawaii uhambo njenge "Egqwesileyo;" ulwaneliseko lwabatyeleli luhleli luzinzile apha ekuhambeni konyaka kunye nokwehla okuncinci kuvavanyo lwangaphambili olwenziwe ngoJuni ka-2021. Xa abaphenduli abathe uhambo lwabo luyi-“Average Average” okanye ngaphantsi babuzwa ukuba yintoni ebiya kufuneka ukutshintsha malunga nohambo lwabo ukuze bakale uhambo lwabo “njengoKugqwesileyo,” iindwendwe zicaphule izithintelo ezimbalwa ze-COVID (32%) zilandelwa kukunyanzeliswa kwemithetho ye-COVID (12%).
Kwiindwendwe eziphindayo ezikhe zaya ngaphambili Hawaii ngoFebruwari 2020 okanye ngaphambili, eyayiphambi kokuphunyezwa kukarhulumente kwezithintelo ze-COVID, iipesenti ezingama-38 zabonisa ukuba uhambo lwabo lwangoku alwanelisi kangako. Esona sizathu sikhankanyiweyo soku yaba zizithintelo ezininzi kakhulu ze-COVID (65%) kunye nokufumaneka okunyiniweyo okanye umthamo weendawo zokutyela, umtsalane kunye neendawo zokulala. Noko ke, ama-90 ekhulwini eendwendwe athi akwazi ukwenza yonke okanye inkoliso yemisebenzi ebeyicetyiwe.
Olu hlolisiso lwabonisa ukuba abakhenkethi abaselula, abahlelwa njengabo bangaphantsi kweminyaka engama-35 ubudala, ngabona basenokuvakalelwa kukuba uhambo lwabo lungaphezu koko bebekulindele.
Xa bebuzwa malunga namava abo, phantse bonke (98%) abaphendulayo balinganise ubuhlobo babasebenzi nabahlali “njengoKugqwesileyo” okanye “Ngaphezu koMndilili.” Uninzi lwabakhenkethi banike ihotele yabo (okanye indawo yokulala) njengegqwesileyo (82%).
Ngo-Okthobha ka-2021, HawaiiInkqubo yoHambo oluKhuselekileyo ivumele abakhweli abaninzi abafika besuka ngaphandle-kwelizwe ukuba badlule kwisigunyaziso sokuzivalela bodwa iintsuku ezili-10 ukuba baye bagonywa ngokupheleleyo e-US okanye ngesiphumo esisebenzayo esingalunganga se-COVID-19 se-NAAT esivela kwiQela eliThenjiweyo loVavanyo. Uninzi lwabatyeleli (81%) bachaze ukuba abanayo nayiphi na imiba kwiwebhusayithi yeeHambo eziKhuselekileyo okanye inkqubo.
Phambi kokufika eHawaii, phantse zonke iindwendwe (98%) bezisazi ukuba izigunyaziso zikarhulumente zikhona, njengokunxitywa kwemaski kwezinye iimeko, ukuhambela kude ekuhlaleni, kunye nokunqanda ukuhlanganisana ngamaqela amakhulu.
Uninzi (70%) lwabaphenduli bathe baya kutyelela eHawaii kwakhona kungakhathaliseki iimfuno zokutyelela kwangaphambili. Kwipesenti ezingama-30 eziseleyo zabaphenduli, iipesenti ezili-18 bathi bazophinda batyelele kwakhona xa ubhubhane uphelile kwaye uninzi okanye yonke imiyalelo ye-COVID efana nezithintelo zeshishini okanye umtsalane zisusiwe, iipesenti ezisi-8 zathi azinazicwangciso zokubuyela eHawaii, kwaye. Iipesenti ezi-4 zithe ziza kundwendwela kwakhona xa kungekho mfuneko yovavanyo lwe-COVID kwangaphambili.